Izindlela ezingu-5 zokulungiselela ihlobo ngesonto
Ngokushesha ehlobo. Lesi isizathu esihle kakhulu sokucabanga ngokujulile ngesimo sakho somzimba. Indlu yokushicilela "iMann, Ivanov noFerber" ixoxisane ngamaphuzu avela encwadini ethi "At the Limit", ezokusiza ngokushesha ukudonsa isimo sakho somzimba nesokomzwelo ngenkathi efudumele. Ake siqale?
Beka umgomo wena
Noma iyiphi iphrojekthi yokuziguqula yona iqala ngohlelo. Wenzani ngokuhlela? Zibuze imibuzo elandelayo:
Nganeliseke kanjani ifomu lami lomzimba?
Yini engiyithandayo ngami futhi engithandi? Ngingabhekana kanjani nalokhu engingathandi?
Yini eyenza ngivuse ekuseni? Yini engishukumisela kimi?
Ngibona kanjani mina ngesonto? Ngenyanga? Ngonyaka? Eminyakeni emihlanu?
Izimpendulo zale mibuzo zizokusiza ukuthi uqalise umgomo wakho uphumelele ngempumelelo. Phambili!
Lahla imikhuba emibi
Into yokuqala okudingeka uyenze ukulahla imikhuba emibi. Futhi yenzeni kanye nhlobo. Futhi ukusheshisa ukusho konke okukudonsa phansi, udinga ukufaka esikhundleni sezinqubo ezingalungile ezinemiqondo emihle. Ngamanye amazwi, ngesenzo esibi, thola ukuphikiswa okukuguqula kangcono. Isibonelo, uma uvame ukudla ukudla okusheshayo, bhalisela amakilasi okupheka ukuze ufunde ukuzilibazisa okusha bese uziqeqesha ukuba udle kahle. Shintsha imikhuba emibi ngezinhle.
Ukuzivocavoca nsuku zonke
Ngabe okokugcina nini ukuya ejimini? Uma ungakwenzi izolo, cabanga ukuthi awukaze uyibheke. Kuyinto yokusebenza nsuku zonke okuzoholela umzimba wakho ngendlela efanele. Ngesikhathi esifanayo, kabili ngesonto umsebenzi womzimba kufanele ube ngaphezulu. Kuphela ngale ndlela ungagcina umzimba wakho uphonsa futhi uwubeke ngokuhlelekile. Qala manje!
Phuma Induduzo Yendawo
Konke okuthakazelisayo empilweni yakho kwenzeka ngaphandle kwendawo yokududuza. Yingakho sigcizelela usuku olulodwa kwiviki lakho eliphezulu futhi ulichithe esimweni esingavamile. Ukwesaba izindawo eziphakeme - gxuma nge-parachute, uzizwe unamahloni ukujwayele abantu - qala ingxoxo nomuntu wokuqala efonini, ungathandi ukukhuluma efonini - shayela abangani bakho nomndeni wakho. Hamba ngokushelela kulokho okwethusa wena!
Ukuphumula okulungile kubalulekile hhayi izenzo ezincane ezisebenzayo. Uma ungashintshi ukunakwa kwakho, khona-ke ubungozi ngokushesha "uphe". Indlela elula yokuphazamisa ukuzindla. Hamba imizuzu engu-15-20 ngosuku kulo mkhuba futhi umphumela ngeke uthathe isikhathi eside. Uzofunda ukulawula ingqondo yakho nokukhipha imicabango ecindezelayo ngesikhathi. Kuzokwenza okuhle! Uma ucabanga ngalunye lala maphuzu futhi uhlala ngesonto ngokulinganiselwa kwamakhono abo, uzokwazi ukulungiselela ngokugcwele ihlobo. Thatha isenzo! Amanye amathiphu awusizo wokuziphonsa encwadini ethi "Ekukhawulweni".
Yeka ukuthi uKsenia Sobchak omncane nabangani bakhe: amalungu okudla nokuqeqesha we-Club SlimBitchClub.
Indlela yokuba ngumnikazi we-press ekahle nomfanekiso wesithombe: izimfihlo zomdlali wesicoco Natalia Rudova
Ngemuva kokuzivocavoca uyobe ulahlekelwe isisindo! Umsebenzi wokushisa we-Fat # 1
Isithunzi "esingelona elihle" sika-Anna Sedokova sijabule ngabalandeli bakhe: imfihlo yesikhalazo sobulili senkanyezi
Ukuqeqeshwa kokudla nokudlalwa kwezemidlalo uBritney Spears: Indlela yokubuyela ngendlela ephelele ngesikhathi esifushane
Ukwehlisa i-twine yabaqalayo kanye nezingane: ukukhethwa kokuzivocavoca ekhaya
Indlela yokuhlanza isisu kanye nezinhlangothi emva kokubeletha ekhaya ngesikhathi esifushane. Ungasheshe ulahlekelwe isisindo kumuntu futhi ususe amafutha esiswini ngokuzivocavoca
Izinwele zokukhwabanisa, i-Autumn-Winter 2016-2017: isithombe sezinwele ezimfashini nezinwele ezinde kakhulu zonyaka ka-2016
Kulungile kanjani ukugcoba imilenze noma ukuxosha umthumeli?
Yini ongayithenga ithoyizi yengane ngonyaka ongu-1
Ukudla kwe-autumn kwezinsuku ezingu-5
I-salmon ye-Pink epholile
U-Xenia Borodina utshele ngokukhulelwa kwakhe kwesibili
Inhlanzi yengulube ne-pesto imbewu sauce
Indlela yokukhetha i-nanny yengane?
UWilliam William ulinganisa izithombe "ezingenalutho" zikaKeith Middleton ku-1.5 million euro
Izakhiwo eziwusizo zekhofi omnyama
Isobho se-Bean ne-ingulube
I-Horoscope ngoNovemba kuzo zonke izibonakaliso ze-zodiac. Uthando, umsebenzi, impilo
Indlela yokususa izinkinga zesikhumba ngokushesha
7 izizathu ezivimbela owesifazane ukuba enze umsebenzi
Indlela yokulahlekelwa isisindo izinsuku ezintathu: ukudla okudlulele "Minus 5 kg"
Ingane esanda kuzalwa, izingubo zengane esanda kuzalwa